Al Shabaab Oo Sheegatay Mas'uuliyadda Weerar Naf-hurnimo Oo Ciidamo Katirsan Dowladda Lagula Beegsaday Deegaanka Siinka dheer.
Thursday March 01, 2018 - 12:15:28 in Wararka by Super Admin
Khasaara xooggan ayaa ka dhashay weerar istish-haadi ah oo maanta barqadii ka dhacay Bar koontarool oo maleeshiyaad katirsan dowladda Federaalka ay ku leeyihiin deegaan dhaca duleedka magaalada Muqdisho.
sawir hore qarax ka dhacay Siinka dheer
Gaari walxaha qarxa lagasoo buuxiyay oo uu kaxaynayay dagaalyahan Naftiis hure ah ayaa lagu dhuftay isku imaatin ay maleeshiyaadka Dowladda Federaalka ay ku lahaayeen koontaroolka Siinka dheer.
War rasmi ah oo kasoo baxay Xarakada Shabaabul Mujaahidiin ayay ku sheegatay Mas'uuliyadda weerarkan, "Camaliyad istish-haadi ah ayaa lagu beegsaday isku imaatin ay maleeshiyaadka murtadiintuku lahaayeen deegaanka Siinka dheer ee duleedka Muqdisho waxaana weerarka dhimasho iyo dhaawac ku noqday in kabadan 20 askari" ayaa lagu yiri warka kasoo baxay Al Shabaab.
Warar hordhac ah ayaa sheegaya in gaariga oo kasoo gudbay isgoyska Ex.control Afgooye uu si gaar ah u beegsaday bartilmaameed ay ku sugnaayeen askar iyo saraakiil katirsan kuwa loo yaqaan Nabad sugidda iyo Alpha Group.
Ciidamo farabadan ayaa xiray wadada laamiga ah waxaana Siinka dheer gaaray gaadiidka caafimaadka oo halkaas ka daabulaya Meydad iyo dhaawacyo, waa weerarkii 2-aad oo Xarakada Al Shabaab ay ka fuliso Muqdisho iyo duleedkeeda isbuuc gudihiis. Jimcihii lasoo dhaafay ayay aheyd markii weerar xooggan lagu qaaday Madaxtooyada iyo xarunta Nabad sugidda.